“Iiraan Oo Tayaysay Yuuraaniyaamteeda In Ka Badan Intii Loo Xadeeyay” | Maanta Somaliland :: Somali News
“Iiraan Oo Tayaysay Yuuraaniyaamteeda In Ka Badan Intii Loo Xadeeyay”
Added by Xuseen Xarbi on July 2, 2019.
Saved under Muuqaal
Dawladda Iiraan ayaa jabisay heshiiskii ay la gaartay quwadaha caalamka sannadkii 2015,
kaas xadidayay tayaynta yuuraaniyaamteeda, sida ay xaqiijisay hay’adda la socota arrimaha hubka wax gumaada ee IAEA.
Hay’addan caalamiga ah ayaa sheegtay in kormeereyaal ka socda ay xaqiijiyeen in laga badiyay 300km.
Iiraan maxay tiri?
Warbaahinta Iiraan oo soo xiganaysa wasiirka Arrimaha Dibadda Maxamed Javad Zarif ayaa Isniintii xaqiijisay in yuuraaniyaamta la tayeeyay 3.67% – arrintaasina ay dhaafsiisan tahay xadkii rayidka loo ogolaa ee quwad koronto ka dhalinta ku ekaa.
“Tallaabada xigta een qaadayno waa in aan tayayno yuuraaniyaamta in ka badan 3.67% midaas oo ah inta heshiisku ogolaa,” ayuu yiri. wuxuu intaas ku sii daray “Reer Yurub waxay ku guuldarraysteen oofinta ballantii ay qaadeen ee ahayd in ay ilaaliyaan danaha Iiraan ugu jira heshiiska la gaaray.